ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အရသာထူးခြားတဲ့ ရိုးရာအစားအစာတွေရနိုင်တဲ့……… – FoodiesNavi
By yin sandi On January 12, 2018 0
နန်းစံတဲ့မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ ? အစားအသောက်ကောင်းတွေ ?????? ပေါများတာကြောင့် လမ်းညွှန်စရာဆိုင်တွေကလည်း တအားပေါများလွန်းပါတယ်။ ??? ဒီထဲကမှ Foodies navi ကနေ Foodies တို့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျမယ့် ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေထဲက? တစ်ဆိုင်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Shwe Yoe Yar Traditional Foods ဆိုင်လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ??? တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာရနိုင်တဲ့ ဆိုင်တွေထဲက တစ်ဆိုင်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ရိုးရာအရသာစစ်စစ်ကိုလည်း လက်တွေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? ဒီဆိုင်လေးကတော့ ?? အိမ်အမှတ် (၉/၃၆) ၊ (၇၃)လမ်း၊မနော်ဟရီလမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။
Shwe Yoe Yar Traditional Foods ဆိုင်လေးဟာ ရှမ်းရိုးရာမုန့်လုပ်နည်းကိုအခြေခံပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ??????? ရှမ်းအစာအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဆန်ခေါက်ဆွဲသုပ် ၊ ဆန်ပြားလိပ် ၊ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ဆန်တို့ဟူးသုပ် ၊ တို့ဟူးဝါသုပ် ၊ မြီးရှည်သုပ် ၊ ဆန်ပြားသုပ် ၊ ထမင်းဝါ တောင်ကြီးဟင်းထုပ် ၊ စတာတွေအပြင် မုန့်တီသုပ် ၊ မုန့်ဟင်းခါး ၊ ပဲပြုတ်ထမင်းဆီဆမ်း ၊ ကောက်ညင်းပေါင်းချို ၊ ချိုချိုမွှေးမွှေးမုန့်လက်ဆောင်းနဲ့ အပူငြိမ်းပြီးဝမ်းအေးရင်အေးစေတဲ့ ❤️??? ပင်ဖိန်း(သဘာဝဂျယ်လီ)ရဲ့ဆေးဖက်ဝင်မှုတွေကို ရရှိနိုင်မယ့် ပင်ဖိန်းကိုလည်းသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? သွေးတိုးရောဂါရှိသူများပါ စားသုံးနိုင်တဲ့ ကချင်ဒံပေါက်ကိုလည်းအော်ဒါမှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။? ?
တိုင်းရင်းသားရိုးရာအရသာစစ်စစ်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ စားကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အစွဲစွဲကြီးစွဲသွားစေမယ့် ??? လျှာအရသာဟာဆွေမျိုးတွေကိုတောင်မေ့မသွားစေဖို့ စာရင်းကြိုမှတ်ထားရမှာနော်။ ???? အရသာကောင်းမွန်မှုနဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုကြောင့် မန္တလေးမှာနာမည်ရနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးပါ။ ??? Shwe Yoe Yar Traditional Foods ဆိုင်လေးဟာနေ့စဉ် ⏰ မနက်(၉)နာရီကနေ? ညနေ(၆)နာရီထိဆိုင်ဖွင့်ပေမယ့် လပြည့်နေ့တိုင်းတော့ဆိုင်ပိတ်ပါတယ်နော်။ ????
In Restaurant Guides Tagged Monk Latt Saung, pin fain, Shan foods Leaveacomment